ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများ: ဇိုလာ - ပြောပြီ
ဇိုလာ - ပြောပြီ
အင်တာမီလန် နည်းပြအသစ် တဖြစ်လဲ အရင်ချဲလ်ဆီး နည်းပြဟောင်း ဂျို့စ်ဆေး မိုရင်ဟိုဟာ ချဲလ်ဆီးကစား သမား လမ်းပတ်ကို ရရှိရန် မလွယ်ကူကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လမ်းပတ်ဟာ လက်ရှိစာချုပ် ၁ နှစ်သာ ကျန်ရှိတော့သည့် အတွက် အင်တာမီလန်အသင်းက အစက ပြောင်းရွှေ့ကြေး ပေါင် ၆.၅ သန်း ၊ နောက်တော့ ၇.၉ သန်း ၊ အခုနောက်ဆုံး ၉ သန်းနှင့် ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်။
သို့သော် ချဲလ်ဆီး ကလပ်က ထိုကမ်းလှမ်းမှုများကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး မိမိတို့အနေဖြင့် လမ်းပတ်ကို အသင်းမှာ ဆက်ရှိနေသေးကြောင်း ၊ လက်ရှိအနေဖြင့်လည်း သက်တမ်း ၁ နှစ်ကျန်ရှိနေသေးပြီး ၊ သက်တမ်းတိုး စာချုပ်ကိုလည်း အမြန်ဆုံးချုပ်ဆို သွားဖို့ ကြိုးစားနေပါကြောင်း ပြောကြားထားပါတယ်။
လမ်းပတ်လို ပရို ကျသော ကစားသမားမျိုးကို ဘယ်တော့မှ မတွေ့ဘူးခဲ့ကြောင်း မော်ရင်ဟိုက ဆွဲဆောင်ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း ရဖို့ လွယ်လွယ်နှင့် မဖြစ်နိင်ကြောင်း ၊ ချဲလ်ဆီးကလပ်မှလည်း လမ်းပတ်လို အသင်းအတွက် စွမ်းဆောင်နိင်သော ၊ အကျိုးပြုသော် ကစားသမားမျိုးကို လက်လွှတ်ခံလိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း ၊ လမ်းပတ်ကို ရရေးမှာ စစ်ပွဲတစ်ပွဲကို ဆင်နွဲရသကဲ့သို့ ခက်ခဲလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း.....
ပါမား ၊ နာပိုလီ ၊ ကက်ဂလီယာရီ တို့တွင် ကစားခဲ့ပြီး ချဲလ်ဆီးတွင် ရှိစဉ်အခါကလည်း ပရိတ်သက် အချစ်တော် ဖြစ်ခဲ့သည့် ၊ ချဲလ်ဆီး၏ အကောင်းဆုံး နိင်ငံခြား ကစားသမားဆုကို ရရှိခဲ့သည့် ဇိုလာက ပြောကြားသွားပါသည်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:44 PM
------ Chelsea -------
မိုက်ကယ် အက်စီယန်ကို (၅)နှစ်စာချုပ်သက်တမ်း
Move To -------> PSG
ရှက်ချန်ကို ပြန်တော့မှာလား ........
We can`t wait any longer
Lampard promised to say at Chelsea......
ချဲလ်ဆီးနဲ့ အလျင်စလို စာချုပ်သစ် မချုပ်နိုင်မှာကို...
Chelsea ၏ နောက်ဆုံး ၈ ပွဲအား ကြိုတင်သုံးသပ်ခြင်း
Chelsea End Arshavin Interest
Welcome to Ronaldinho !!!!
ယခုနှစ် ချဲလ်ဆီးအသင်း ကန်ရမည့် ပွဲစဉ်ဇယား
Goal of the season.....2007 - 2008 ( Premier Leagu...
Happy Birthday Ko Soe Thawn !